एचआइभी सङ्क्रमित बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढी, श्रीमान् पनि रहेनन्, सहारा पनि छैनन् |
एचआइभी सङ्क्रमित बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढी, श्रीमान् पनि रहेनन्, सहारा पनि छैनन्
१६ मंसिर २०७६, सोमबार ०४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । डडेल्धुरामा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । एचआइभी सङ्क्रमित हुनेमध्ये बढीजसो कामको सिलसिला र रोजगारीका लागि भारत जानेमा बढी भएको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । एचआइभी सङ्क्रमित १३६ जनामध्ये डडेल्धुरामा हालसम्म ९६ जनाले मात्रै नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । बाँकी सङ्क्रमितले पुनं कामका लागि अन्य स्थान वा भारत जाने–आउने क्रमले गर्दा नियमित औषधि सेवन नगरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सय बर्ष बाँच्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस जापानीहरुको यी ४ सुत्र
जे गरेपनी मोटाउनु छोड्नुभएन ? यी १० कारण थाहा नपाएपछी तपाई नमोटाए को मोटाउँछ त !
के तपाईले खराब सपना देख्नुहुन्छ ? त्यसो भए थाहा पाउनुस्, २० सपनाको फल
प्याजको चिया पिउनुहोस तौल घटाउनदेखी यि रोगहरु ठीक पार्नुहोस
होसियार हुनुहोस ! नयाँ कपडा लगाउदा लाग्न सक्छन यी रोग